Zvikonzero zvishanu zvekudzidza basa rechipiri | Kugadzira uye zvidzidzo
Zvikonzero zvishanu zvekudzidza basa rechipiri
Maite Nicuesa | 13/05/2022 12:36 | Dhigirii
Mushure mekuwana dhigirii rekuyunivhesiti, vadzidzi vazhinji vanoenderera mberi negwara redzidzo nekupedza dhigirii remasters. Vamwe vanosarudza kuita kutsvaga basa uye kupinda pakutanga kwebasa ravo rebasa. Sarudzo dzinofanirwa kuongororwa dzakasiyana. Saizvozvo, kudzidza a Mujaho wechipiri imwe nzira yekufunga nezvayo. Pazasi tinonyora zvikonzero zvinogona kuwedzera chishuwo chako chekuita sarudzo.
1 1. Kudzidzira kugona
2 2. Pedzisa ruzivo rwebasa rekare
3 3. Kuziva hakuna muganhu
4 4. Kutsvaka mufaro
5 5. Wedzera kuonekwa kwechiratidzo chega
1. Kudzidzira kugona
Mudzidzi anoenda kuburikidza nemaitiro akareba ekudzidzira kusvika apedza kuzadzikiswa kwezvinangwa zvedzidzo zvekosi yega yega. Nguva yakareba umo mune shanduko yega yega inodarika kusangana neruzivo. Iyo yunivhesiti, senzvimbo yesainzi uye yehunhu, inosimudzira budiriro yevadzidzi. Raibhurari, zviito izvo chikamu chepakati zviitiko ajenda uye kusikwa kwezvibatanidza zvitsva kuwana kukosha kwakakosha mune ino mamiriro.
2. Pedzisa ruzivo rwebasa rekare
Sarudzo yekudzidza basa rechipiri inokurudzira kutanga kutsva. Asi ishanduko yechikuva inogona kuiswa yakanangana neyakapfuura. Iyi ndiyo mamiriro ezvinhu apo hunyanzvi hwakawanikwa hunowedzera kukosha kweiyo yapfuura degree. Kusanganiswa kwedzidziso dzese dziri mbiri kunosimudzira kosi yemudzidzi mukutsvaga kwakasimba kwekutsvaga basa. Naizvozvo, kupedza madhigirii maviri kunowedzera dhigirii rekushanda mumusika wevashandi. Asi mamiriro akasiyana anogonawo kuitika.
Dzimwe nguva, mudzidzi anopedza basa rekutanga uye anoona, panguva yekuita, kuti chiitiko ichi hachinyatsoenderana nezvavanotarisira. Uye, nekudaro, anoda kudzidzira basa remaoko. Muchiitiko ichocho, basa rechipiri rinomiririra mukana mutsva wekuwana rimwe basa.
3. Kuziva hakuna muganhu
Pane chikonzero chakakosha chekuenderera mberi nedzidzo mushure mebasa: hapana muganho wakajeka weruzivo. Zvinokwanisika kuongorora chokwadi kubva kune mamwe maonero. Uye rechipiri basa rinopa zviwanikwa uye maturusi ekuongorora chinhu chekudzidza. Zita rezvidzidzo rine mukurumbira wepamutemo unokosheswa zvakanyanya nemakambani ari kutsvaga tarenda idzva. Madhipatimendi ezvishandiso zvevanhu anogamuchira nyanzvi yekuzvimiririra yeavo vanotumira CV yavo kuti vape masevhisi avo.
Vanhu vazhinji vanotumira tsamba yavo yekuvhara nechishuwo chekuzvisiyanisa kubva kune vamwe vakwikwidzi. Zvakanaka, kechipiri kumhanya kunoburitsa iyo mhedzisiro zvakananga. Iko hunhu hunogonesa nyanzvi nekudzidziswa kwakanakisa.
4. Kutsvaka mufaro
Basa rechipiri rinogadzirira mudzidzi kutarisana nebasa rake rehunyanzvi aine zvimwe zviwanikwa, maturusi uye hunyanzvi. Asi sarudzo yekutanga chiitiko chitsva chedzidzo haibvi pane ramangwana chete. Iro idanho rinowana zvarinoreva panguva ino munguva pfupi, yepakati uye yakareba.
Kazhinji, mudzidzi anofarira ruzivo rwekupinda makirasi, kuzvivandudza uye kuwana zvinangwa zvitsva zvedzidzo. Izvi zvinoreva kuti, protagonist anoona kufara kwake mukubatana neyunivhesiti, iyo yaanoramba ari chikamu kuburikidza nekupedzwa kweimwe basa.
5. Wedzera kuonekwa kwechiratidzo chega
Vakapedza kudzidza vanoita zviito zvakasiyana-siyana kuti vasiyanise zvidzidzo zvavo mukusarudza. Vanonyoresa mumakosi, vanopinda misangano uye vanowedzera simba ravo kuburikidza nekudzidziswa. Zvakanaka, basa rechipiri rinodyisa zvakanyanya kuoneka kwemhando yemumiriri. Kukodzera kunowanikwa kuburikidza nehurongwa hwekuda husina matambudziko. Zvipingamupinyi izvo mudzidzi akakunda nekutsungirira, kukurudzira, kutsunga uye kuzvivimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Dhigirii » Zvikonzero zvishanu zvekudzidza basa rechipiri
Maitiro ekusanganisa PhD uye kushanda
Chii chinonzi epidemiologist